Mpanamboatra sy mpamatsy nify sifotra excavator any China MINYAN
Ny fitaovana fampidirana an-tany dia miaro ny ampahany lafo amin'ny sininao ary ny androm-piainanao lava kokoa dia mampihena ny vidin'ny fikolokoloana anao. ny nify bucket excavator dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana ny fahombiazan'ny milina amin'ny fampiharana manokana.
Fahaizana manomeFahaizana manome:500000 Ton / Ton isam-bolanaFonosana sy fandefasanaAntsipirian'ny fonosana: boaty hazoSeranana: Qingdao, Lianyungang, ShanghaiFe-potoana :
Famaritana ny nify bucket:
Material: Vy vy, firaka vy, sns, toy ny T1, T2, T3, T4.
Karazana milina: Excavator, Loaderan'ny kodia, Bulldozer, sns.
Brands: MARIKA REHETRA
Fitsaboana hafanana: Fitsaboana famonoana olona sy fanamainana
hamafin'ny: Nify: HRC48-52, Sanda vokany> = 16J; Adaptatera: HRC34-38, Sanda fiantraikany> = 25J
Toetran'ny asa: miaraka amin'ny elongation tsara sy tanjaka mahery, ka tena mety amin'ny toe-javatra miasa mafy maro samihafa.
Antsipiriany momba ny nify:Izahay no tena manome ny kojakoja excavator. Toy ny siny vatokely excavator, siôve sieve excavator, nify bucket excavator, ripper excavator, fanapahana sisiny, coupler haingana an'ny excavator sns. Ny marika azontsika omena ny marika rehetra. Ny tsenanay indrindra dia an'izao tontolo izao, toy ny USA Canada, South Africa, Brazil, Chile, Egypt, Sudan, Singapore Middle East. sns. izay manokana ny sehatry ny milina fananganana toy ny nify siny, ripper excavator, sisin'ny fanapahana, coupler haingana an'ny excavator sns Fitaovana: vy vy, vy vita amin'ny vy, sns, toy ny T1, T2, T3, T4. Karazan'akanjo: Excavator, Loader, Bulldozer, sns marika: marika rehetra sanda> = 16J; Adaptors: HRC34-38, Sanda vokany> = 25J Toetran'ny asa: miaraka amin'ny faharetana sy tanjaka mahery, ka tena mety amin'ny fepetra miasa mafy maro samihafa.
Afaka manome karazana Excavator Bucket Teeth isan-karazany toy izao isika:
Product Lines1. Teknolojia fanamboarana: Casting Precision2. Fitaovana: Steel Steel3. Ny vokatra fanamoriana mazava tsara dia mandray ny fizotran'ny fanariana savoka mando silicate, fanaraha-maso mandeha ho azy ny fitsaboana hafanana, loko hosodoko feno rano ary rafitra fanamainana mandeha ho azytombony1.Miaina an-taonany maro amin'ny indostrian'ny milina injeniera.2.ny tsena lehibe ataonay: Sina manontolo, Moyen Orient, Afrika, Afrika atsimo, Amerika sns.3. Tsy ny fivarotana fotsiny no amidy, fa afaka mamolavola ny fangatahan'ny mpanjifa ihany koa.4. Miaraka amin'ny entana marobe. Mavo, maitso, loko safidy.5. Ny kalitao dia antoka amin'ny fahaizana mpiasa, mpiasa marina ary ekipa QC.6. Vidin'ny orinasa, kalitao tena tsara, serivisy matihanina.7. Afaka mametraka ny sary famantarana sy marika anao amin'ny vokatra misy be dia be izahay.8. Fotoana fohy: 30 andro isaky ny kaontenera 20ft.
Anontanio ary valio F: Orinasa mpivarotra ve ianao sa mpanamboatra?A: Orinasa izahay.F: Mandra-pahoviana ny fotoana andefasana anao?A: Amin'ny ankapobeny dia 5-10 andro raha tahiry ny entana. na 15-20 andro raha tsy ao anaty tahiry ny entana dia arakaraka ny habetsany izany.F: Manome santionany ve ianao? maimaimpoana ve sa fanampiny?A: Eny, afaka nanolotra santionany maimaimpoana izahay fa tsy mandoa ny vidin'ny entana.F: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?A: Fandoavana <= 1000USD, 100% mialoha. Fandoavana> = 1000USD, 30% T / T mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana.
Mifandraisa aminayRaha manana fanontaniana hafa ianao, azafady mifandraisa aminay toy ny etsy ambany:Wechat: +86 13270253222Tranonkala: www.Soso-kevitra: Izahay dia afaka manome anao sary famantarana sy marika miaraka amina habe betsaka.Ny fahafaham-ponao no tanjonay farany, tongasoa anay hifandray aminay.
Mamokatra koa izahay:
Previous: manatanjaka ny siny miasa eto an-tany ny excavator
Manaraka: mpitrandraka haingana excavator